Tuugada Internet-ka ee China oo wajahay cawaaqib
Mareykanka iyo dalal kale oo dunida ah ayaa ku eedeeyay Jamhuuriyadda Shacbiga ee Shiinaha [the People’s Republic of China, or PRC] in ay qaadday kana qeybgashay weerarro daran oo dhanka internet-ka, oo ay ku jiraan weerrarada lagu dalbado madax-furashada, iyo sidoo kale xatooyada hal-abuurka iyo macluumaadka taasi oo si toos ah ay uga faa’iideysanayaan shirkadaha Shiinaha.
Mareykanku waxa uu si qotodheer uga walaacsan yahay in PRC ay kobcisay howlgal dhanka sirdoonka ah oo ay ku jiraan qandaraasleyaal kombuyuutarrada jabsada ama u dhaca kuwaasi oo dunida oo dhan ka fuliya weeraro sharci-darro ah oo dhinaca internet-ka, oo ay ka leeyihiin faa’iidooyin Shiinaha u gaar ah. Dabeecadaha mas’uuliyad-darrada ah ee PRC ee weerarrada loogu dhaco internet-ka waa kuwa aan waafaqsaneyn ujeedooyinkeeda ay ku sheegtay in ay ku dooneyso in loogu arko hoggaamiye mas’uul ah oo caalamka ka jira.
Tusaale ku saabsan xatooyada hal-abuurka iyo macluumaadka, xeerbeegti federaali ah ee magaalada San Diego ee gobolka California, ayaa bishii May waxa ay dacwad ku soo oogtay afar muwaadin iyo kuwa deggan Jamhuuriyadda Shacbiga Shiinaha, iyadoo lagu oogay in ay qaadeen olole ay ku jabsanayeen kumbuyuutarrada toboneeyo shirkado, jaamacado iyo hay’ado dowladeed ee gudaha Mareykanka iyo daafaha caalamkaba intii u dhexeysay 2011-kii ilaa 2018-kii.
Dacwadda oo ay Waaxda Caddaaladda Mareykanku daahfurtay 16-kii July ayaa tilmaamaysa in weerrarada ay xoogga saarayeen uruurinta macluumaad faa’iido u leh shirkadaha Shiinaha iyo waaxaha ganacsiga. Shirqoolka ayaa si gaar ah u daneynayay xog suuragelin karta in la hareer maro cilmi-baarisyada iyo geeddi-socodyada horumarineed oo ahaa kuwa baaxad leh.
Ding Xiaoyang, Cheng Qingmin iyo Zhu Yunmin, ayaa ahaa saraakiil ka tirsan Waaxda Ammaanka ee Gobolka Hainan, waana xarun hoostagta Wasaaradda Ammaanka ee Shiinaha iyadoo isku-duwda, fududeysa, islamarkaana maamusha kuwa kumbutarrada u dhaca iyo dadka ku xeeldheer afafaka ee shirkadaha MSS ee qaada weerarrada loogu kumbuyuutarrada ee loogu daneynayo in ay ka faaiideystaan shirkadaha ay dowladda Shiinuhu leedahay, iyo kuwa ay dowladdu baritaarto.
Wu Shurong ayaa ahaa nin kumbuyuutarrada u dhaca, wuxuuna abuuray hannaan u sahla in uu ku jabsado hannaanka kumbuyuutarrada ee dowladaha shisheeye, shirkadaha, iyo jaamacadaha, wuxuuna sidoo kale maamulay kooxda kumbuyuutarrada weerarta ee Hainan Xiandun.
Ololaha kumbuyuutarrada lagu jabsanayo ayaa waxa uu beegsaday dhibaneyaal ku kala sugan Mareykanka, Austria, Cambodia, Canada, Germany, Indonesia, Malaysia, Norway, Saudi Arabia, South Africa, Switzerland iyo the United Kingdom. Weerarradan ayaa dhacay xilli ay Mareykanka iyo PRC 2015-kii gaareen heshiis looga dan lahaa in lagu joojiyo xatooyada lagu gaysto weerarada lagu jabsado kumbuyuutarrada.
“Eedeymo dambiyeedyadan ayaa mar kale iftiiminaya in Shiinuhu uu sii wado in uu adeegsado weerarada internet-ka si uu u xado hal abuurka ay sameeyeen dalalka kale, wuxuuna si cad u dhinac marayaa ballanqaadyadii laba geesood, iyo kuwii uu la galay dhinacyo badan,” ayay tiri ku-xigeenka Xeer Ilaaliyaha Guud ee Mareykanka Lisa O. Monaco.
“Sida ku cad dacwadda lagu soo oogay saddexda sarkaal ee MSS iyo mid ka mid ah qandaraasleyaashooda kumbuyuutarrada jabsada,” ayuu yiri Xoghaye Blinken, “Mareykanka waxa uu jawaab cawaaqib leh saari doonaa kuwa fuliya weerarrada aadka u daran ee dhanka internet-ka ee PRC mas’uuliyad-darradooda ku aadan dhanka internet-ka awgeed.”
Taasina waxa ay ahayd faallo ka tarjumeysay aragtida dowladda Mareykanka.